Strategy First University Accounting – Strategy First University
ဒီဇင်ဘာလ တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် ICM Single Subject Diploma in Accounting (Online) ​
သင်ကြားမည့်ဆရာ၊ သင်တန်းချိန်၊ ​
Class Code : SFU-ICM-ACC-01-01​
Lecturer : ဒေါ်ခင်နွဲ့အုန်း, B. Com (Hons), M.Com (YIE)​
Online Video Starting Date: 27 Nov 2021​
ZOOM Starting Date : 4-Dec-2021​
Day and Time : Saturday (6:00 pm to 8:30 pm)​
သင်တန်းကာလ မှာ တစ်ပတ်ကို (၁) ရက်တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလ (၃)လ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ​
Remote Assessment ဖြင့်ဖြေဆိုရပါမည်။​
Exam Fees – 110 USD နှင့်ညီမျှသောမြန်မာငွေကျပ်။​
ပညာအရည်အချင်း (၁၀)တန်းအောင်မြင်သူပြီးသူ (သို့မဟုတ်) ဘွဲ့တခုခုရပြီးသူ ဖြစ်ရပါမည်။​
လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ စာရင်းကိုင်ပညာရဲ့ အရေးပါမှု၊ စာရင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတခုအတွက် အရေးပါတဲ့ Financial Statementsတွေကိုဘယ်လိုရေးဆွဲမယ်ဘယ်လိုစီစစ်မယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းများကိုသင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာရင်းကိုင်ပညာရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်အထိနားလည်တက်ကျွမ်းလိုသူတွေ၊ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူတွေ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် လုပ်ကိုင်ရန် ရည်မှန်းထားသူတွေ တက်ရောက်သင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ICM Accounting ဟာယခုခေတ်ခေတ်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ Accounting ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေ အပေါ် အခြေခံပြီးစနစ်တကျသင်ကြားမယ့် ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
စာရင်းကိုင်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသူများ၊ Accountingကိုစနစ်တကျလေ့လာလိုသူများ၊ စာရင်းနှင့်တိုက်ရိုက်မပတ်သက်သော်လည်းစီမံခန့်ခွဲမှုပြုရမည့်managersတိုင်းတက်သင့်သလို၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ထားသူများ၊ လက်ရှိ Accounting ပိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသူများတက်ရောက်သင့်သောသင်တန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတိုင်းအတွက် အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ စာရင်းကိုင်ပညာရဲ့ အရေးပါမှု၊ စာရင်းပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတခုအတွက် အရေးပါတဲ့ Financial Statements တွေကိုဘယ်လိုရေးဆွဲမယ်ဘယ်လိုစီစစ်မယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းများကိုသင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။​
စာရင်းကိုင်ပညာရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူတွေ၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် လုပ်ကိုင်ရန် ရည်မှန်းထားသူတွေ တက်ရောက်သင့်တဲ့ သင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ICM Accounting ဟာယခုခေတ်ခေတ်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ Accounting ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေ အပေါ် အခြေခံပြီးစနစ်တကျသင်ကြားမယ့် ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ICM Single Subject Diploma in Accounting
ဘာသာရပ်တွင် အသေးစိတ်သင်ကြားရမည့် ခေါင်းစဉ်များမှာ​
I. Financial Resources and Business Planning​
The role of the accountant​
II. The Construction of Financial Statements​
Cash flow statements​
Accounts of clubs and societies​
III. The Provision of Financial Information​
Accounting ratios and preparing reports / SSAPs & FRSs​
IV. Planning and Decision-Making Accounting for Costs​
Further Accounting Issues​
The trial balance, journal and suspense accounts​
The extended trial balance​